बीमा कम्पनीले नेपालमै पुनर्वीमा गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, धेरै हुँदैमा प्रतिस्पर्धी हुन्न :: BIZMANDU
बीमा कम्पनीले नेपालमै पुनर्वीमा गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, धेरै हुँदैमा प्रतिस्पर्धी हुन्न
प्रकाशित मिति: May 16, 2018 12:13 PM
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संस्था धेरै आउँदैमा प्रतिस्पर्धा नहुने बताएका छन्। बीमा समितिको स्वर्ण जयन्तीको अवरमा उनले कम्पनी धेरै आए सेवा विस्तार भएर गाउँ गाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रले देखाएको बताए।
संस्था धेरै भएपनि केन्द्रिकृत हुँदामात्र समस्या आउने भन्दै उनले नयाँ अनुमति पाएका कम्पनीलार्इ आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न अनुरोध गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले धेरै नियामक निकायलार्इ खारेजी गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा बीमा समितिलार्इ भने बलियो नियामक निकाय बनाउने बताए।
बीमामा पुनर्बीमा मार्फत निर्यात बढि गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
लघु बीमाको क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले ध्यान नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नियामक निकायले अवका दिनमा यस्ता पोलिसीमा इनफोर्स गर्न नसक्ने बताए। बीमाको बजार बढाउनलार्इ लघु बीमालार्इ अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरे।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला बीमाले सहयोग गर्ने बताए। उनले अभिकर्तालार्इ थप प्रोत्साहित गर्दै बीमाको दायरा बढाउनु पर्ने धारणा राखे। नेपालले बैंकमा खाता खोल्न गार्हो तर भुक्तानी पाउन सजिलो भएपनि बीमामा बीमा गर्न सजिलो तर भुक्तानी पाउन धेरै गार्ह्रो भएको बताए।
बीमा कम्पनीले नेपालमै पुनर्वीमा गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, धेरै हुँदैमा प्रतिस्पर्धी हुन्न को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।